भारतले धार्चुलादेखि कालापानीसम्मको सीमा क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो, आखिर के गर्न खोज्दै छ भारत ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/भारतले धार्चुलादेखि कालापानीसम्मको सीमा क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो, आखिर के गर्न खोज्दै छ भारत ?
नेपाली सेना घोरेटोबाटो र सडक निर्माणका लागि भन्दै यस क्षेत्रमा शिविर राखेर बसेको छ । व्यासको छाङ्गरुमै नेपाली सैनिकलाई राख्ने प्रस्ताव अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत समेत गएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भन्नुभयो, “व्यास क्षेत्रमा सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउने गरी सेनाको समेत उपस्थिति हुन सक्छ । हामीले सीमा नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जिल्लाबाट हुने गृहकार्य गरेर पठाएका छौँ ।” file foto